Re: ntụkwasị obi | Martech Zone
Wenezde, August 14, 2013 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 2, 2015 Douglas Karr
O mere ọzọ. Mgbe m na-enyocha ndepụta (enweghị ike ịkwụsị) nke ozi-e ndị na-akụ igbe mbata m, achọpụtara m ozi nzaghachi. N'ezie, usoro isiokwu ahụ malitere RE: ya mere o jidere anya m ma meghere ya ozugbo.
Ma ọ bụghị azịza. Ọ bụ onye na-ere ahịa chere na ha ga-abawanye ọnụego ha site na ịgha ụgha niile nke ndị debanyere aha ha. Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ ọnụego ha, ha tụfuru atụmanya ma gbakwunye wepu aha na mkpọsa ha. Ikekwe ọnụego emeghe mere ka ịpị aka na ahịa ụfọdụ, mana agaghị m azụ ụdị onye a.
Trust ọ bụ ihe dị iche n’etiti onye mepere ma pịa na ozi ịre ahịa email gị na onye zụrụ ma na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na enweghị m ike ịtụkwasị gị obi ka ị zitere m email na-akwụwa aka ọtọ, enweghị m ike ịtụkwasị gị obi ka gị na gị nwee mmekọrịta mmekọrịta miri emi.
Ekwela ka m mehie m, Abụghị m onye nzuzu gbasara ntụkwasị obi. Aghọtara m na ụlọ ọrụ ndị tụkwasịrị obi mgbe ụfọdụ kwesịrị “adịgboroja ya ruo mgbe ha mere ya” site na asambodo, nsonaazụ nyocha, nleba anya, ọkwa, nyocha, wdg. Inwe nnabata web nke n’eme ka ntụkwasị obi bu uzo di nkpa iji nwekwuo onu ogugu.
Nsogbu a kapịrị ọnụ ebe a bụ na anyị nwererịrị guzobere ntụkwasị obi mgbe m denyere aha ha. M nyere adreesị ozi-e m nyere ha ka ha wee kpọtụrụ m. Ma site n'omume na-abịa ụfọdụ ọrụ dị mfe… esoghị adreesị email m, emegbula adreesị email m, ma ghara ịgha ụgha na m na ozi ịntanetị.
Nke a abụghị naanị echiche nke aka m. Ekwenyere m na ị na-eje ije n'ụzọ dị mkpa na iwu CAN-SPAM. CAN-SPAM abụghị naanị maka ikike wepu aha ya, ọ na-ekwupụtakwa n'ụzọ doro anya na ị ga-enwerịrị usoro isiokwu dị mkpa - nke ị ga-enye n'ime ọdịnaya ahụ ma ọ bụghị aghụghọ. IMO, itinye “Re:” na usoro isiokwu gị bụ aghụghọ.
Kwụsị ime ya.
Tags: nwere ike-spamahịrịokwu aghụghọemailemail isiokwu akararezaghachispamUsoro isiokwutụkwasị obi
Ahịa na-eduzi Mgbasa ozi Mgbasa ozi Facebook
Sep 3, 2013 na 5:39 PM
Ọ bụ ezie na anaghị m ekwenye. O nwere ike ịbụ na ị na-aghọ obere crotchety. Naanị kwuo '. 😉
Sep 4, 2013 na 9: 46 AM
@curtfranke: disqus - aghọ?
Sep 4, 2013 na 11: 08 AM
Anọnyere m gị. (Naanị jụọ ụmụaka m.)
Sep 5, 2013 na 6:53 PM
Echere m na nke a na-akpali ndị mmadụ n'echeghị echiche na-anwa imeziwanye usoro onye ọ bụla na-enweghị ihe gbasara metrik metụtara. Likedị dị ka iche echiche na ị na-amụbawanye ihu akwụkwọ n'ụzọ ụfọdụ na-akpaghị aka tụgharịa na ego.